कुलमान नभईकन पृथ्वी घुम्दैन भन्ने कुरो हुँदैन्: उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट – Chautari Online
September 14, 2020 461
सु-दृष्टि खबर : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको कार्यक्रममा कुलमानको आज आवश्यकत्ता छ कि छैन ? एउटा शक्तिशाली मन्त्रीको हैसियतले तपाईले केही बताउन सक्नुहुन्न ? भनेर सोधेको प्रश्नमा मन्त्री भट्टले भने, होईन त्यो, कुनै व्यक्ति नभईकन, पृथ्वी घुम्दैन भन्ने कुरो हुँदैन्। हरेक विकल्पहरु हुन्छन्। फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउनैपर्छ वा ल्याउन हुन्न भनेर बोलिरहन आवश्यक छैन्।सरकारलाई कुलमान घिसिङ आवश्यक छ कि छैन ?
भनेर तेर्साएको अर्को प्रश्नमा भट्टले भने होईन, हरेक विज्ञ व्यक्ति यो वा त्यो हिसाबले आवश्यक भैरहन्छन् नि सरकारलाई। आवश्यकत्ता नै छैन भनेर कसैलाई भन्ने यो विषय त हुँदै होईन। कुलमानलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे आफूलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको उनको संकेत छ। उनले कुलमानबाहेक अरुले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा गलत भएको जिकिर गरे। उनले भने काम टिमले गर्ने हो। कुलमानजीको पनि टिम थियो। टिमले काम गरेको हो। त्यसलाई हामी सबैले स्विकारेको कुरा हो।
Prevयी हुन माता लक्ष्मीका ८ रुप, कस्को पूजा गर्दा के प्राप्ति ?
Nextनिर्दयी घरबेटी : पानीको निहुँमा निभेको ज्योति